I-Burnside Holiday Cottage, i-Craignure, i-Isle of Mull - I-Airbnb
I-Burnside Holiday Cottage, i-Craignure, i-Isle of Mull
IBurnside Cottage Craignure ihleli emazantsi ekupheleni kweCraignure bay ngolwandle lwelali/izibuko kunye nepier endala ngaphambili. Indawo entle yokuphumla kwaye ubukele iiferi ziza kwaye zihamba. Burnsides iyindawo etofotofo, enezixhobo ezifanelekileyo ezifanelekileyo kwizibini okanye abahlobo.
ICraignure isembindini wesiqithi kunye neevenkile zayo zasezilalini, iihotele zokutyela, iikhefi, i-pub kunye nesikhululo senqanawa. Indawo yokupaka ingaphambili kodwa inkonzo yebhasi elungileyo emantla nasezantsi ihamba ukusuka eCraignure ngeyure ukuba awunamoto.
IBurnside ifakwe kakuhle kuyo yonke indawo, ngokufudumeza kombane kunye namanzi. Ngegadi yayo yabucala ungangena kwipropathi ngomnyango wangaphambili kwiveranda / epasejini, kukho igumbi lokuhlambela ngasekhohlo kwakho kunye nebhafu / ishawa kunye nendlu yangasese. Ekunene ligumbi lokulala elikhulu elijonge ngaphambili elwandle / ilali. Ifakwe ibhedi ye-Queen, enokuguqulwa ibe ziibhedi ezimbini ezingatshatanga (nceda ucele oku xa ubhukisha) enewodrophu enkulu kunye needrowa ezininzi. Ubungakanani obuhle ILounge ngqo phambili ineembono zolwandle ukusuka kwifestile enkulu ukuya ngaphambili. Eli ligumbi lokuphumla elikhanyayo elinomlilo ovulekileyo, ifanitshala epholileyo ethambileyo, iTV yesibhakabhaka esimahla (yiza nekhadi lakho lesibhakabhaka) kunye netafile yokutyela ngasemva kwegumbi. Ngasemva kweLounge kukho ikhitshi enayo yonke into oza kuyidinga- i-cooker, ihob, ifriji / ifriji kunye nemicrowave, kettle & toaster. Umnyango ongasemva ekhitshini ukhokelela kwigadi yangasese engasemva enendawo yepatio enetafile kunye nezitulo. Ukutsha kweBurnside kusebenza kanye emazantsi egadi.
Ukutya okumnandi kuhanjiswa kwindawo ye-Craignure pub nje eyi-100m kude.
Zombini ihotele kunye neloji eCraignure zinendawo yokutyela engahlaliyo emnandi ukuba awufuni ukupheka. ICraignure spar kunye neSalen spar (imizuzu eli-10 kude nangaphezulu)
Ukuba ufuna naluphi na uncedo-Sihlala imizuzu emi-5 kuphela kude kwilali elandelayo yaseLochdon.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Craignure